गर्भवती हुँदा के खाएमा छोरा जन्मन्छ ? जानी राखौ – Vision Khabar
गर्भवती हुँदा के खाएमा छोरा जन्मन्छ ? जानी राखौ
। ६ कार्तिक २०७४, सोमबार १२:५५ मा प्रकाशित
हामी सानै हुँदा अनि देखि त्यस्ता धेरै धेरै भनाइ वा उखान सुन्दै आएका हुन्छौं। कतिले हामीलाई बिस्वासमा पार्छन् भने कति बेकारका लाग्छन्। तर कतिपय यस्ता पुराना भनाइहरु बिज्ञानले पनि सत्य हुन्छ भनेर साबित गरेको छ। हामीले सुन्दै आएका कुराहरु जस्तै:खुर्सानि ओसिएमा पानी पर्छ,भ्यागुति चलाए छाला चिलाउंछ, गर्भवति हुंदा टन्न केरा खए छोरा हुन्छ,दुध धेरै खाएमा बच्चा गोरो जन्मिन्छ आदि र अन्य धेरै। यस्ता भनाइहरु केहिमा सत्यता नभए पनि केहि भने सत्य हुने बिज्ञानले पनि मानेको छ।
जसले लिङ्गको लम्बाइ बढाउन मदत गर्छ। तर उनिहरु यो पनि बिस्वास गर्छन् कि केरा खादा छोरा हुने सम्भावना केबल ५५ प्रतिशत मात्रै हुन्छ। सम्भावना बढि हुने बहेकोले नै गर्दा हुन सक्छ अनतदेखि यो भनाइ भनिदै आएको छ। त्यस्तै यदि महिला गर्भवति हुँदा छतिमा बढि पोल्छ भने रौं धेरै भएको बच्चा जन्मने कुरा पनि बैज्ञानिक रुपमा सिद्ध भैसकेको छ।